Shiinaha miiska kumbuyuutarka qoraalka lagu qoro ee White house oo leh 4 khaanadood Soo saaraha iyo Badeecad | Yifan
Miiska kombuyuutarka ee wax lagu qoro ee cad ee xafiiska guriga leh 4 armaajo
Naqshadaynta casriga ah ee dhalaalaya dhalaalka dhalaalaya, miiskani wuxuu leeyahay dusha sare oo alwaax cad ah. Dhameystir cad oo jilicsan ayaa si fudud loo nadiifin karaa waxayna ku siin kartaa taabasho casri ah.
STYLE casriga ah
QIIMEYNTA SHARCIGA 120x45x70cm
Soo bandhigida 4 shelf oo furan waxay bixisaa meel kufilan oo lagu keydiyo agabyada xafiiska, Waraaqaha, faylalka faylalka, iyo waxyaabo badan oo qurxin yar yar, shelf 4-tier Si haboon ayaa loo dhigi karaa dhanka bidix ama midig iyadoo la siinayo waxqabad-shaqeeyn ah, oo si fudud wax walba u habeysan. isaga oo ka dhigaya isku-darka saxda ah ee shaqada, adkeysiga iyo qaabeynta qaab casri ah.
Miis qafiif weyn oo 25mm ah
Nooca Waxyaabaha: guddiga walxaha ama MDF tayo sare leh (sabuuradda dhexdhexaadka ah).
Lugaha biraha ah ee jilicsan ee kujira lakabka budada cad, birta birta ah waxaa loo dhisay inay bixiso qol lug ah oo aad ufiican si aad u kala bixin karto oo aad si raaxo leh uga shaqeyn karto miiska kombiyuutarkaaga.
Meel fara badan, xaruntan shaqada sare ee qaro weyn waxay u adeegtaa miiska xafiiska gurigaaga, miiska kombiyuutarka ama xarunta wax lagu qoro, caruurtu waxay ku dadaalaan miiska dadaal la'aan.
Kala duwanaansho awgeed, miiska waxaa loo qaabeyn karaa bidix ama midig si loo waafajiyo xafiis kasta oo ka mid ah gurigaaga yar, aqalkaaga ama kondho.
Miiskan fudud ee wali la taaban karo wuxuu noqon doonaa ku darista ugu fiican xafiiskaaga guriga.
Ku habboon qolka waxbarashada carruurta, xafiiska guriga, qolka qorista
Dhismaha guddiga walxaha adag ee dhammeeyey dahaadhay, waara oo xasilloon
Dhaldhalaalka sare ee midabka cad
Lugaha birta ah ee kujira dahaarka budada cad
1 shelf 4-tier
Waxa ugu fiican oo dhan, way fududahay in la shiro oo ay fududahay in lagu nadiifiyo oo keliya maro qoyan oo loo baahan yahay.
• Miisaanka saafiga ah: 30kg
• Cabbirka Guud: 120L x 45D x 120H cm
• Dhererka Miiska: 70cm
• Cabbirka shelf (4-tier side): 48W x 24D x 120 H cm
Hore: Miiska kombiyuutarka xafiiska kombiyuutarka casriga ah ee qaabka leh shelf furan
Xiga: Miiska kumbuyuutarka ee is haysta ee casriga ah ee xafiiska guriga oo leh 1 khaanad, 2 kabadh furan, 1 shelf hoose
Miiska Kombiyuutarka Qoryaha leh Khaanado
Miiska Kombiyuutarka Qoryaha leh Hutch
Miiska Kombiyuutarka Qoryaha leh Kiiboodhka Keyboard
Miiska Kombiyuutarka looxa
Shaxda Kombiyuutarka Qoryaha